I-Cialis: Indlela Yokuyithatha kwaye Kude Kude kangakanani AASraw
/Blog/Cialis , tadalafil/I-Cialis: Indlela Yokuyithatha kwaye Ixesha elide Lilala
ezaposwa ngomhla 10 / 13 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Cialis, tadalafil.
Ukusebenza ngokukhawuleza kwesikhumba se-Cialis kunye nexesha elide
iqala ukusebenza ngokukhawuleza kunezinye izidakamizwa ze-ED, ngokuqala kokusebenza kwimigqa ye-30 ngokuqhelekileyo. Isiphakamiso kukuthatha i-Cialis powder 30 imizuzu phambi komsebenzi wesondo, ngelixa kunye kunye Levitra, abasebenzisi bayalawulwa ukuba bathathe imichiza ye-60 imizuzu ngaphambi kokusebenza ngokwesondo. Ngokuqhelekileyo, imiphumo yeCialis ekupheleni kwe24 kwiiyure ze-36 emva kokuyithatha. Inyaniso yokuba iziphumo zihlala zihlala ixesha elide liye lithengisa kakhulu iCialis, eyazibiza ngokuthi "ipilisi yeveki." Amadoda amaninzi afana nawo angathatha iCialis ngoLwesihlanu ebusuku, kwaye abuye abe nemiphumo yeCawa ekuseni. Ubuninzi bexesha leziphumo zeCialis livumela ukuba kubekho ukukhawuleza kunye nokucingela ngaphantsi kwexesha lokuyithatha.
Iinkqubo ezimbini zonyango ezifumaneka kunye neCialis
Ngokungafani nokhuphiswano lwayo, i-Cialis ineendlela ezimbini zokwahlula. Inokuthi ithathwe kwisiseko esifanelekileyo, okanye ingathathwa kwinqanaba eliphantsi kwansuku zonke. Kuthatyathwe kwisiseko esifanelekileyo, isilinganiselo esilinganiselwe ngu-10 mg, nangona ikhona kwi-20 mg kunye ne-5 mg i-doses xa i-10 mg ijika ibe yinto engafanelekanga.
Kuphi ukuthenga i-Tadalafil yangempela ipowder eluhlaza kwi-intanethi?
Unokufumana ezininzi ezivela kwikhompyutha, kodwa kunzima ukuthenga i-Tadalafil yangempela powder online. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthenga iTadalafil powder online, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
I-Tadalafil ipowder for sale: Indlela yokukhetha umthengisi we-tadalafil?
Kuthatha ixesha elingakanani iCialis 20mg ukusebenza? Stanozolol- Top selling steroids for bodybuilding !!!